OnePlus 3 Review - News Fitsipika
Previous OnePlus finday avo lenta no nilaza ho "flagship mpamono olona". Izany no mbola tsy tena marina, fa ny OnePlus 3 no tena tsara amin'ny finday avo lenta priced latsaka ny antsasaky ny vidin'ny ambony mpifanandrina.
Premium aluminium vatana, lamba tsara sy ny fakan-tsary, tondro lehibe scanner, bloat-rindrambaiko malalaka, sy ny andro ny bateria - amin'ny antsasaky ny vola lany ny Samsung
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “OnePlus 3 famerenana: flagship telefaonina ao amin'ny tapaky ny vidin'ny isan-karazany” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 14 Jona 2016 17.00 UTC
The OnePlus 3 dia ny farany ambony-end finday avo lenta namidy tamin'ny tapaky ny vidin'ny isan-karazany avy amin'ny Sinoa mpanamboatra OnePlus, izay manolotra voadio be traikefa ho an'ny latsaky ny Samsung, HTC, LG na Apple.
The 3 no fahefatra finday avo lenta avy OnePlus - kely startup Sinoa mikendry ny hanome ny tsara indrindra azo atao traikefa be vokatra ho an'ny kely vola noho ny mpifanandrina - ary dia dingana lehibe amin'ny toro-lalana rehetra ny tamin'ny taona lasa OnePlus 2.
Aluminium ambony ka hatrany ambany
Ny bokotra capacitive andaniny roa amin'ny bokotra an-trano azo swapped lafiny, tokony tianao ny indray ny bokotra eo ankavanana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The OnePlus 3 dia rehetra-vy finday amin'ny kely curved indray, malefaka sy contoured sisin'ny fitaratra anoloan'ny izay tapers eny manoloana ny sisiny. Tsy mahatsiaro tsara atambatra, tena lehibe ao amin'ny tanana, ary toy ny tsara indrindra avy any ambony-priced mpifanandrina.
Ny 5.5in HD feno lamba dia mavitrika, amin'ny inky mainty hoditra, manan-karena sy ny excellently loko fotsy fotsy hoditra. Tsy ho avo vahaolana, ka noho izany tsy ho Pixel-mikitroka toy ny Samsung Galaxy S7 Edge, na izany aza, izay fitarainana ilany-by-lafiny. Izany ihany koa ny fampiasana tsy lehibe noho ny zava-misy amin'ny virtoaly-headsets, fa ny ankamaroan'ny mpividy dia ho faly amin'ny hatsaran'ny ny efijery.
Ny fampisehoana tena tery koa bezels-daniny, izay mahatonga ny OnePlus 3 tena tery ho lehibe-hanakona finday avo lenta, ary mihoatra noho ny ankamaroan'ny manageable satria ny ankapobeny haben'ny ny fitaovana dia tena kely foana. Raha oharina amin'ny ny tsara indrindra 5.5in finday avo lenta misy, ny Samsung Galaxy S7 Edge sy ny curved efijery, ny OnePlus 3 ihany 2.1mm midadasika kokoa. Izany ihany koa 1.8mm lava noho ny Samsung.
Ny fampahafantarana Slider lehibe. Google dia tokony hanao izany ho ampahany iray fitsipika finday Android. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny iray amin'ireo zavatra tsy manam-paharoa ho OnePlus dia fampahafantarana Slider amin'ny lafiny-telefaonina izay Switches eo mangina, laharam-pahamehana sy ny fampahatsiahivana. Tena lehibe sy finday Android rehetra dia tokony hanana ny iray.
Rafitra fikirakirana: Android 6.0.1 OxygenOS
Camera: 16MP aoriana fakan-tsary amin'ny OIS, 8MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Top spec dia saika overkill
Dual Sim fanohanana tsy mahazatra ao amin'ny UK, indrindra ho ambony-spec finday avo lenta. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The OnePlus 3 mitantana Qualcomm ny farany ambony-farany finday avo lenta Chip, ny Snapdragon 820, izay azo inoana fa ny ankamaroan'ny fahefana ny flagship finday avo lenta ho an'ny sisa 2016. Tena tsara tarehy Chip mahery vaika izay hiatrehana saika na inona na inona na iza na iza dia mety miezaka hanao amin'ny smartphone.
Zavatra iray izay mametraka ny OnePlus 3 Ankoatra ny entana dia ny 6GB ny RAM. Most finday avo lenta manana 2 na 3GB, ny sasany toy ny Galaxy S7 Edge manana 4GB. Arakaraka ny RAM an-tariby manana ny fampiharana bebe kokoa sy ny vakizoro eo amin'ny navigateur dia afaka misokatra tamin'izany andro izany, fa amim-pahatsorana no somary 6GB overkill ny inona no azo atao amin'izao fotoana izao. Raha mijery ny fahatsiarovana Monitor naorina ho Android, ny 5.6GB ny RAM misy, I zara raha nampiasa mandrakizay mihoatra noho 3.5GB. Toy ny solosaina, na izany aza, ianao ve handeha ihany no mila bebe kokoa toy ny fahatsiarovana ny zavatra fandrosoana, mba afaka mijery izany ho toy ho avy-proofing.
The OnePlus 3 dia snappy sady nahatanteraka tsara mandritra ny fitiliana, amin'ny kely teny an-dalana ny fitarainana na ny tsy fahaizany miteny haingana toy na aiza na aiza. Izany mihitsy aza ampiasaina raha 30 minitra lalao fivoriana tsy mahazo loatra mafana tamin'ny andro Ambient hafanana namely 25C.
Ampiasaina ho toy ny fitaovana voalohany indrindra tamin'ny efatra ora ny mihaino mozika amin'ny alalan'ny Bluetooth écouteur, telo ora lany Browsing na mampiasa fampiharana, tsindraindray lalao ary maka sary, -jatony ny hanoto fampahatsiahivana mandritra ny tontolo andro, ny OnePlus 3 naharitra fotsiny ny 24 ora eo fiampangana.
Voamariko fa ny bateria fiainana mandritra ny andro dia tena tsara – amin'ny feh amin'ny sasany amin'ireo fahefana bebe kokoa mahomby finday avo lenta – fa standby fotoana nandritra ny alina dia mahantra, very eo 12 ary 16% -poana raha mbola sisa amin'ny mangina eo amin'ny sisim-pandrian latabatra ho an'ny fito ora. Ny ankamaroan'ny fitaovana very manodidina 1% -poana isan'ora.
Dash Niandraikitra mijery ary miasa toy ny fifadian-kanina hafa mamaly ny vahaolana, fa ny telefaonina tsy mahazo mafana ary afaka mampiasa azy io raha fiampangana sy mbola ambony izany amin'ny taha ambony indrindra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
OnePlus no fahazoan-dalana anabavy Sinoa mpanamboatra finday avo lenta ny fifadian-kanina Oppo mamaly ny teknolojia, izay miasa amin'ny fomba hafa noho ny ankamaroan'ny haingana hafa mamaly ny vahaolana amin'ny mifindra ny fifadian-kanina fa mamaly ny poti-ho ny fahefana adaptatera, fa tsy ny telefaonina. Niandraikitra ny Dash rafitra lehibe indrindra mahatonga ny loharano ny hafanana nandritra ny mamaly ny avy ety voatsapa ny telefaonina akaikin'ny bateria ny zavatra plugged ho any an-rindrina, izay midika hoe ny telefaonina dia afaka Mampianiana haingana tsy misy aminareo, izay manana ny manahy momba izany overheating.
Fa mamaly ny amin'ny aotra ho 100% naka 72 minitra, raha aotra ny 75% naka 36 minitra. Izay no tsy be haingana kokoa noho ny tsara indrindra ny sisa, rehefa tsy ampiasaina. Ny maha samy hafa dia ny telefaonina tsy nafanaina niakatra mihitsy, ary azo ampiasaina toy ny ara-dalàna tsy misy impacting ny mamaly ny tahan'ny. Ny ankamaroan'ny fitaovana mafana loatra ary tsy maintsy miadana ny mamaly ny hafainganam-pandeha, indrindra fa rehefa misy olona no mampiasa ny fitaovana sy ny lamba eo amin'ny.
Ny lafy ratsiny dia ny hoe raha pepero ny OnePlus 3 amin'ny alalan'ny tsy misy Dash-poana ny hery mifanaraka adapters, toy ny solosaina, ny telefaonina fiampangana amin'ny miadana, ara-dalàna ny tahan'ny. Dash lovia vidin'ny £ 16 isan- – noho izany dia mendrika ny mividy iray hafa miaraka amin'ny telefaonina.
The OnePlus 3 koa manana lafiny roa-Sim finday, izay tena tsy fahita firy ao amin'ny UK, izany hoe afaka manana drafitra roa samy hafa, tambajotra sy ny telefaonina isa mampitohy ny iray finday – ilaina ny mitondra asa an-tariby sy ny finday manokana amin'ny fitaovana iray, ohatra.
mbola tsara kokoa, afaka manohana roa karatra Sim in standby niara-, izay midika karatra roa dia azo mifandray amin'ny 4G / 3G tambajotra tamin'izany andro izany. Indrindra karatra iray ihany no fanohanana in 2G maody, discounting tambajotra toy ny UK telo, izay tsy mampiasa ny 2G famantarana.
OxygenOS, raha tsy tianao izany
OxygenOS tsara, fa misokatra bootloader dia midika hoe afaka manova izany ho an'ny hafa dikan-Android raha te. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
OnePlus mahatonga ny fomba amam-panao dikan-Android hoe OxygenOS. Ny dikan farany dia mifototra amin'ny Android 6.0.1 Marshmallow ary ny tavan'ny dia toa tsy misy hafa avy amin'ny dikan-Android nihazakazaka tamin'ny Rohy Google ny finday avo lenta.
OxygenOS manana somary hafa mpandefa miaraka amin'ny orinasa antsoina hoe talantalana tamin'ny ankavia-tena homescreen pane – fitoerana ho nametraka gadget, Apps sary masina sy ny toetr'andro. Ireo mpampiasa dia afaka ihany koa ny teo-efijery Fikarohana bokotra, na mampiasa ny capacitive aza manendry izay olona ambany ny lamba mba hamonjy toerana ary koa ny ampanjifaina ny zavatra ataony.
Ny talantalana dia momba ny maha samy hafa ny Google ihany ny Rohy Android dikan. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ohatra, Nasiako-droa paompy ny vao haingana Apps nampiasa ny bokotra avy hatrany Switch to farany efa nampiasaina fampiharana – ny endri-javatra izany no nampitombo ny manaraka Android dikan-N. Ny fifantenana ny fihetsehana hafa, ary koa ny Ambient Asehoy ny fomba izay nanaitra ny lamba, rehefa tonga fampahatsiahivana ao, na mampiasa ny fakan-tsary mba mamantatra raha ny tananao no ambonin'ny varavarana lamba mba hifoha, dia hita ihany koa ao.
OxygenOS dia iray amin'ireo tsara kokoa, nesoriny ny akanjony indray ary bloat-maimaim-poana dikan ny Android.
The OnePlus 3 tondro scanner dia iray amin'ireo tsara indrindra an-trano-bokotra misy fomba Sela Mpandray Hafanana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny an-trano ny bokotra miasa ho toy ny tondro scanner, izay mafy sy manaiky. Ny ankamaroan 'ny fotoana dia ho nahafantatra ny ankihibe voalohany, fa indraindray dia miady ny ankihibe rehefa tsy tena manarona ny sensor rehetra amin'ny fijery hafahafa.
Izany dia be kokoa ny OnePlus 2, ary kely fotsiny ny ratsy noho ny tena tsara indrindra avy Huawei.
Ny fakan-tsary OnePlus fampiharana miezaka ny ho sarotra ny maka sary ratsy sy mahomby amin'ny ankapobeny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny tena 16-megapixel fakan-tsary eo amin'ny indray dia afaka ny sasany tifitra tsara tarehy jiro manerana samy hafa ny toe-piainana. Amin'ny jiro tsara ny fakan-tsary dia mamokatra antsipirihany sary tamin'ny loko lifelike somary tsy be fahoriana. Amin'ny toe-javatra sarotra jiro, toy ireo solon eo ambanin'ny fahazavana, ny sary dia afaka mijery kely feno grainy amin'ny vokatra.
Dash Chargers power other devices up to 2A, izay ara-dalàna mamaly ny tahan'ny
OnePlus mivarotra fiara Dash dovia for £ 25
Izany dia midika hoe nahazo NFC, izay ny OnePlus 2 Hafahafa ihany no tsy – tsara ho an'ny Android Pay
Ny finday sambo tamin'ny manidy bootloader manao izany mora kokoa ny fomba amam-panao nampiditra Android dikan-, tokony tsy toy OxygenOS
Izany dia tonga noho ny efijery mpiahy mialoha nametraka, fa toy ny ankamaroan'ny lamba mpiaro amin'ny contoured na curved fitaratra, mijoro mafy toy ny ankihibe.
Ny curved aluminium indray mahatsiaro lehibe eny an-tànan'ny sy belays ny £ 309 vidiny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The OnePlus 3 ny vidin'ny £ 309 ($399) Misy amin'ny fotsy tamin'ny volamena misy loko taty aoriana. Ny finday no ho hita mahitsy avy OnePlus raha tsy misy ny orinasa mampiady hevitra manasa ny rafitra.
Fa raha oharina, ny 5.5in Samsung Galaxy S7 Edge ny vidin'ny £ 639, ny Google Rohy 6P vidin'ny £ 449 sy ny Huawei P9 Plus ny vidin'ny £ 500.
Fa ny £ 309 anao hahazo tsara tarehy, tsara-nanao vy finday avo lenta, miaraka amin 'ny bateria fiainana, lamba tsara sy ny fakan-tsary, ary snappy fampisehoana. Ianao koa mahazo fiaviana roa-Sim fanohanana sy 64GB ny fitehirizana naorina tamin'ny. Izany no mora ny tsara indrindra OnePlus finday avo lenta nataony.
Ny lehibe indrindra fitarainana ny teo aloha ny fomba OnePlus finday avo lenta dia sarotra izy ireo mba tena hividy, izay tsy tokony ho ny raharaha intsony, raha ny orinasa no niasa mafy mba hanatsara ny fanohanana safidy.
Misy fanontaniana iray mbola eo ny hafainganam-pandehan'ny rindrambaiko fanavaozam-baovao, fa ho ambony-spec amin'ny finday avo lenta isan-karazany ny tapaky ny vidin'ny, tsy mahazo natao tsara noho ny OnePlus 3.
Maharatsy ny mifampiresaka: tsy removable bateria, tsy expandable fitehirizana, miadana fa mamaly ny amin'ny anjara-raharaha tsy Dash fahefana adapters, lamba ambany Res for VR
OnePlus 2 famerenana: tena 'flagship namono'?
OnePlus X famerenana: Hetezo-Price finday avo lenta izay toa ka mahatsapa Premium
Android, Article, Finday, Famerenana, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, UK Teknolojia
← Huawei P9 Plus Review Kanseran'ny nono Cell Fitomboana nijanona ny fahosan'ny taolana Zava-mahadomelina →